जिप्सी दुलही त्रयी, अपराध उपन्यास गाथा जो हजारौंलाई मोहित गर्दछ | वर्तमान साहित्य
जब एक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता "जिप्सी दुलही त्रयी" को लागी खोजी गर्दछ, स्क्रिनले कथासँग सम्बन्धित लिंकहरू प्रदर्शन गर्दछ जुन हजारौं पाठकहरूलाई मोहित गर्दछ। यो एक अपराध उपन्यास श्रृंखला हो जुन सुरू भयो जिप्सी दुलही (२०१))। हुनसक्छ, जनताको ठूलो हिस्साले अपराध उपन्यासको संयोजन भेट्टायो र जिप्सी समुदायको बारेमा केहि विस्तृत प्रतिनिधित्वहरू अपूरणीय थियो।
अर्को वर्ष यो प्रकाशित भयो बैजनी जाल, एउटा अनुक्रम जसको विकास पहिलो पुस्तकको अन्तसँग नजिकको सम्बन्धित छ। यसको सट्टामा बच्चा (2020) - यद्यपि यससँग पहिलो दुई किस्ताको समान नायक छ— pयो पूर्ववर्ती पदहरू पढे बिना बुझ्न सकिन्छ।
1 लेखक को हो?
2 त्रयीको विश्लेषण
3 जिप्सी ब्राइड (२०१ 2018)
4 पर्पल नेटवर्क (२०१ 2019)
4.1 प्लट र सारांश
5 बच्चा (२०२०)
5.1 मुख्य पृष्ठ
5.2 एक बिट पूर्वानुमान विकास, तर बराबर लत
लेखक को हो?
जिप्सी दुलही त्रयी का पुस्तकहरु द्वारा हस्ताक्षर गरे कार्मेन मोला, छद्म नाम। वास्तवमा, carmenmola.es वेबसाइटमा वर्णन पढ्छन्: "... म्याड्रिडमा जन्मिएका लेखक जसले अज्ञात रहन निर्णय गरे"। त्यस्तै गरी, केही साहित्यिक पोर्टलमा लेखकको सन्दर्भले स्पानिश राजधानीमा काम गर्ने एक शिक्षकको बारेमा चर्चा गर्छ।
मोलाले बारम्बार (आफ्नो सम्पादक मार्फत) भनेको छ कि उनको लेखनको लागि प्रेरणा विशुद्ध रूपमा चंचल छ। उही तरीकाले, उनले फ्रेड वर्गास, टोनी हिल, लोरेन्जो सिल्भा, लेमेट्रे वा एलिसिया गिमनेज बारलेट, अरूलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो प्रभावको रूपमा उल्लेख गर्छन्। यसै कारणले तिनी अपराध उपन्यासको सबजानतिर लागे किनकि उनी "उनीहरु पनि समाजको रूपमा एकै समयमा विकास भएको" मान्दछन्।
प्रत्येक पुस्तकले पूरै गाथाको मुख्य पात्र एलेना ब्लान्को द्वारा अनुसन्धान गरीएको फरक केस प्रस्तुत गर्दछ। उनी एक अत्यधिक बुद्धिमान इन्स्पेक्टर हुन् "अनुभवी" एक अपराध उपन्यास नायकका सबै विशिष्ट घटकहरूका साथ। त्यो हो, एक अविवाहित (तलाकशुदा) महिला एक कडा स्वभावको साथ धेरै जसो दर्दनाक विगतको कारणले हुन्छ।
पक्कै पनि, ब्ल्यान्कोको यातना केवल कुनै पनि होइन: उनलाई शंका छ कि उनको छोरा "बैजनी जाल" (दोस्रो पुस्तकको केन्द्रीय विषयवस्तु) द्वारा अपहरण गरिएको थियो। थप, उनी कराओकेलाई मन पराउँछिन्, धेरै पिउन मन पराउँछिन्, हत्याराको विकृतिको साथ "बाँच्न" सक्षम छन्। यो अन्तिम गुण उहाँको लागि सबै अज्ञात स्पष्ट गर्न महत्वपूर्ण छ।
तिनीहरू संवेदनशील व्यक्तिको लागि पाठ सिफारिश गरिदैन, यो अपराधको लागि जिम्मेवार मनोचिकित्सक द्वारा प्रदर्शन क्रूरता को स्तर को कारण। यो अधिक छ, क्रूर र एस्क्याटोलजिकल तस्बिरहरूका साथ कथामा दुर्व्यवहार भनेको स्थिर तत्व हो। सबै रगत को बाहेक - केहि पाठकहरु लाई घृणित को लागी अरुलाई नशा गर्ने - सबै तीन पुस्तकहरु धेरै राम्रो गरी सकेको छ।
नायक एक अपराध उपन्यास को लागी एक बिट "cliché" भएता पनि, तीन शीर्षक द्वारा उत्पन्न हुक निर्विवाद छ। यसको अध्यायहरूको छोटो र चिसो संरचनाले यसमा धेरै योगदान गर्दछ। जबकि अपराधको रिजोलुसनको आधारमा मुख्य कथा धागो, कथाहरू र पूरक चरित्रहरूले षड्यन्त्रमा जटिलता थप गर्दछन् (यसको गतिशीलताबाट विचलित नगरी)।
यस अर्थमा, Zárate एक सही काउन्टरवेट को रूप मा कार्य गर्दछ र इंस्पेक्टर ब्लान्कोको पार्टनर हो। अवश्य पनि, ह्याकर हजुरआमा सम्पूर्ण श्रृंखलामा सबै भन्दा वास्तविक चरित्र हो। सँगै, सबै सह-तारा र प्रत्येक subplots घटनाहरूको नतीजा जान्न दर्शकहरूको चासो पुष्टि।
जिप्सी दुलही (2018)
सुसाना मकाया केही दिन पछि उनको स्नातक पार्टीको उत्सव मनाए पछि मृत देखिन्छ। सुरुमा, यो विचलित गर्ने अपराध हो किनकि ओसिसाको टाउकोमा प्वालहरू बनाएकोले, जसबाट गँड्यौलाहरू परिमार्जन गरियो। यस कारणले गर्दा जासूसहरूले सुसानाकी बहिनी लारा मकायाको बारेमा कठोर कार्यान्वयन विधि सम्बन्धित छ जुन सात वर्ष अघि मारिएको थियो।
जे होस् लाराको हत्यारा भेटियो र कैदमा परेको थियो, शंकाले सम्पूर्ण पुलिस ब्रिगेडमा आक्रमण गर्‍यो इन्स्पेक्टर एलेना ब्लान्कोको नेतृत्वमा। के उनीहरूले निर्दोष मानिसलाई लक गरेका थिए? के अर्को साइकोले उहि चरणहरू दोहोर्याइरहेको छ? केवल एउटा कारण निर्विवाद जस्तो देखिन्छ: जिप्सी आमा बुबाको प्रेमिकाप्रति क्रूरता जसले उनीहरूको परम्परालाई आधुनिक समाजमा एकीकृत गर्नका लागि झल्कायो।
जिप्सी दुलही (दुलही ...
बैजनी जाल (2019)
यो गाथाको न्यूरजिक पुस्तक हो, किनकि पहिलो किस्तको अन्त एलेना ब्लान्कोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गहन खोजीसँगै टुंगियो: उसको छोरो लुकासको। अरु के छ त, बैजनी जाल अन्तहीन भयानक अपराधहरू समावेश गर्दछ, मकाया बहिनीहरूको मृत्युसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सहित।
को रूपमा जिप्सी दुलही, तथ्यहरूले पुस्तकको बीचमा अलि अलि बढी एनिमेटेड जड़त्व प्राप्त गर्दछ। त्यस बिन्दुमा, पाठक निरन्तर अपराधीहरूको पहिचान र प्रेरणाको बारेमा प्रश्नहरूको सामना गर्दछ। जोसँग त्यस्ता निर्लज्ज श्रद्धा र साहसी छ कि उनीहरू आफ्नो यातना इन्टरनेटमा प्रसारित गर्न सक्षम छन्।
बैजनी नेट (दुलही ...
एकपटक सम्पूर्ण बैजनी नेटवर्क भत्काए पछि, एलेना ब्लान्कोले आफ्नो परिवारको जीवनको आनन्द लिनको लागि अनुसन्धान ब्रिगेडबाट राजीनामा गरे।। यो नोट गर्नुपर्दछ कि सेवानिवृत्त निरीक्षक एक धनी परिवारको हो (यो पक्ष अपराध उपन्यासमा "सांसारिक" जासूसको पुरानो शैलीको बिरूद्ध छ)। अचम्म मान्नुपर्दैन, उनी म्याड्रिडको प्लाजा मेयरमा घर छिन।
एक बिट पूर्वानुमान विकास, तर बराबर लत
ब्लान्कोलाई पुलिसले फेरि सम्पर्क गरे जब उनको एक अन्वेषक (एक्सस्का) पार्टीमा गए पछि रहस्यमय ढंगले हरायो। विशेष रूपमा, यसलाई कसैले चिनियाँ वर्ष (सुँगुरको) प्रवेशको उत्सव पछि देखेको छैन। त्यहाँ, हराएको महिलाले बरु आकर्षक व्यक्तिलाई भेट्यो, यदि अलि श susp्कास्पद छ भने। (त्यस बिन्दुमा, घटनाहरू अलि पूर्वानुमान योग्य छन्, तर ...)।
Xesca सुँगुरको फार्मको नजिक ओछ्यानमा बाँधेर उठ्छ (केटीले उनीहरूले सुन्न सक्दछन्)। त्यसकारण, पार्टी र macabre अनुष्ठान कि शुरू हुन लागेको छ बिरामी सम्बन्ध को एक प्रकारको छ। त्यो बाटो, स्पूकी प्यासेजको साथ गहन छिटो-गतिमा गरिएको क्रियाकलापको बीचमा समयको बिरूद्ध दौडले केटीलाई बचाउन सुरू गर्दछ.
ला नेना (जिप्सी दुलही ...
को अन्तिम भाग जिप्सी दुलही यो इन्स्पेक्टर ब्लान्कोको वरिपरि घटनाहरू अन्वेषण जारी राख्न निमन्त्रणा हो। को निष्कर्ष विपरीत बैजनी जाल र को बच्चा, जुन अधिक निश्चित देखिन्छ। जे होस्, कारमेन मोलाको सम्पादकीय सफलता दिएर, एलेना ब्लान्को अभिनीत नयाँ शीर्षकहरूको प्रकाशन आश्चर्यजनक हुनेछैन वा एक टेलिभिजन श्रृंखला।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » जिप्सी दुल्हन त्रयी
लुइस कास्टाएडा। २०२० अमेजन साहित्यिक पुरस्कार विजेताको साथ अन्तर्वार्ता